Arsenal oo dhaqaatiir u direysa wadanka Brazil si ay caafimaadka u mariyaan Everton Soares – miyey la saxiixdeen? – Gool FM
Arsenal oo dhaqaatiir u direysa wadanka Brazil si ay caafimaadka u mariyaan Everton Soares – miyey la saxiixdeen?
(Turin) 16 Luulyo 2019. Arsenal ayaa lagu soo warramayaa iney dhaqaatiir u direyso wadanka Brazil si ay halkaas caafimaadka ugu marsiiyaan xiddiga ay doonayaan ee Everton Soares.
Gunners ayaa si weyn loola xiriirinayaa xiddiga reer Brazil ee wacdaraha ka dhigay koobka qaramada qaaradda Koonfurta America, saddex gool ayuuna shabaqa dhex dhigay intii uu ka qeybgalayay tartanka.
Fox Sports oo ah warbaahin laga leeyahay Brazil ayaa shaaca ka qaaday in Arsenal ay dhaqaatiir u dirtay Porto Alegre si ay xaaladda caafimaad ee Everton Soares usoo qiimeeyaan, 23-jirkaan ayaana la fahamsan yahay inuu ka mid noqon doono Gunners.
Sidoo kale wararka ka imaanaya dalka Brazil ayaa sheegaya in dhameystirka heshiiska xiddigaan ee Arsenal uu dhaw yahay, iyadoo kooxda waqooyiga London ay ku qaadaneyso 25 Malyan oo Pound iyo gunno aan la shaacin balse ku xiran qaab ciyaareedkiisa mustaqbalka.
Xiddigaan wuxuu noqon karaa saxiixa labaad ee Unai Emery xagaagan, waxeyna horay ula saxiixdeen 18-jirka reer Brazil Martinelli.
Inter Milan oo tallaabo kale u qaadi doonta Romelu Lukaku & qorshaha ay damacsan tahay iney ku qanciso Man United oo la ogaaday.